वुहानबाट कोभिड-१९ डायरी: महामारीपछिकाे भविष्य कस्ताे ? · Global Voices नेपालीमा
वुहानबाट कोभिड-१९ डायरी: महामारीपछिकाे भविष्य कस्ताे ?
नियमहरू परिवर्तन भइरहन्छन् जसले मानिसहरूलाई असुरक्षित र अधीर भएको अनुभव गराउँछ
लेखक Winston Chiu
अनुवाद पोष्ट गरिएको 10 मे 2020 9:10 GMT
यो लेख पढ्नुहोस् русский, Français, Italiano, বাংলা, Ελληνικά, Español, Deutsch, عربي, Filipino, English
आवासीय जिल्लामा समुदायका पुरुषहरूका लागि कपाल काट्न नाई आयो। (फोटो क्रेडिट: गुओ चिङ्। अनुमतिसहित प्रयोग गरिएको)
निम्न पोष्ट स्वतन्त्र फिल्म निर्माता र नारीवादी विद्वान एइ सियाउमिंग र नारीवादी अभियन्ता गुओ चिङ्द्वारा लिखित डायरीको श्रृंखलामा बाह्रौं हो। दुवैजना काेभीड–१९ काे उद्गमस्थल वुहानमा बसाेबास गर्दै आएका छन्। यहाँ यस श्रृंखलाका पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, चौथो, पाँचौं, छैठौं, सातौं, आठौं, नवौं, दशौं र एघारौं भागहरूका लिंकहरू छन्।
COVID-19 को विश्वव्यापी प्रभावबारे ग्लोबल भ्वाइसेजको विशेष कभरेज पढ्नुहोस्।
यो श्रृंखला मार्च १५ र मार्च १९, २०२० बीचमा लेखिएको थियो। यी दैनिकीका सकल लेख भने ‘म्याटर न्यूज'मा प्रकाशित छन् ।
एइ सियाउमिंग: मार्च १५, २०२०
आज बिहान जब मैले फ्रिज खोलेँ खाना खोज्दै, मेरो हात डम्पलिंगमा रोकियो। चिनियाँ नववर्ष भन्दा अघि, मेरो भान्जा भाइ र उनकी श्रीमतीले म र मेरो भाइको लागि १,००० डम्पलिंगहरू तयार पारेका थिए र हाम्रो सहयोगीले पनि मलाई छुट्टीमा घर जानुभन्दा पहिले सयौं डम्पलिंग छोडिदिइन्। अब मसँग २०-३० वटा डम्पलिंग मात्र बाँकी छन्। म यी सबै डम्पलिंगहरू समाप्त गर्न सक्दछु। तर त्यसो भए, यदि मेरो भाइकी श्रीमती र उसका बच्चाहरू मलाई भेट्न आए भने उनीहरूले यी हातले बनाएको स्वादिष्ट पदार्थहरूको मज्जा लिन सक्ने छैनन्।
म बेफिक्री भएकोले अझै पनि पर्याप्त डम्पलिंग नहुँदा चिन्तित छु। यसले मलाई केहि भिडियो क्लिपहरूको सम्झना दिलाउँदछ कि कसरी कतिपय मानिसहरु खानाबाट वञ्चित भए । केहि बुढा व्यक्तिहरू जसलाई अनलाइन किन्ने समूहहरूमा सामेल हुने कुरा थाहा छैन-तिनीहरू आफ्ना घरबाहिर बस्ने र सामुदायिक कामदारहरूले तरकारी ल्याएकाे पर्खिरहेका छन्। प्राय: दिनको अन्त्यमा, तिनीहरूले अन्य शहरहरूमा रहेका आफ्ना छोराछोरीहरूलाई कुनै तरकारी नपाएको कुरा बताउँनेछन्।
जब मानिस प्रकोप वा दर्दनाक अनुभव भोग्छन्, उनीहरू आफ्नो अधिकार र मर्यादाको रक्षा गर्न दृढ रहने वा उनीहरूका सिद्धान्तहरू छोड्नेबीच संघर्ष गर्दछन्। पछिल्लो अवस्थामा हामीले प्रत्येक पटक कुनै प्रकोपको अनुभव गर्दा हाम्रा केही सिद्धान्तहरू त्याग्यौं। केही प्रकोपपछि, पीडितहरूले केवल बाँच्नेलाई भाग्यशाली ठान्न सक्छन्। यस महामारीपछि, हामी शायद जीवित हुनुलाई भाग्यशाली महसुस गर्नेछौं। तर समग्रमा हाम्रो समाजको के छ? के यसले मानव जीवन र अधिकारको लागि बढी आदर गर्नेछ? के यसले आफ्ना आधारभूत सिद्धान्तहरू छोड्नेछ? हालसालै, हामीले धेरै नै महामारी नियन्त्रणका उपायहरू अवलोकन गरेका छौं जसले मानव अधिकारहरूको उल्लंघन गर्दछन्। कमजोरहरू असुरक्षित छन्। प्रकोपबाट जोगिंदा दीर्घकालीन नकारात्मक असर पर्न सक्छ, जस्तै केवल बाँच्नको लागि सन्तुष्टि र अन्यको खर्चमा व्यक्तिगत स्वार्थ र चासोको लज्जाबाेध।
गुओ चिङ्: मार्च १५, २०२०
आज घाम लाग्यो। लगातार धेरै दिनहरू घमाइला भए। यस्तो लाग्छ कि बसन्त आइपुगेको छ। यो शहर जाडोदेखि बसन्तसम्म बन्द छ। आज हाम्रो च्याटरूममा कोहीले शून्य कन्फर्मेसन केस समुदायहरूको अपडेट गरिएको सूची पोष्ट गर्नुभयो, र अन्त्यमा हाम्रो समुदाय सूचीमा छ। हामीले हाम्रो क्षेत्रका अन्य समुदायहरू पनि खोज्यौं। दिउँसो, हाम्रो जिल्लाको ढोकामा “शून्य कन्फर्मेस केस समुदाय” भएको संकेत पोस्ट गरिएको थियो। सम्पत्ति व्यवस्थापन निर्देशकले एउटा फोटो लिए र हाम्रो च्याटमा पठाए। हामी फोटोलाई ‘मनपराउँछौं’, सराहना गर्छौं र कृतज्ञ महसुस गर्दछौं।
गुओ चिङ्: मार्च १६, २०२०
धेरै दिन अघि, केही नेटिजेन्सहरूले पत्ता लगाए कि मेडिकल स्टाफले महामारीको समयमा सामान्य भन्दा थोरै तलब पाए । चिकित्सा कामदारहरूले सामान्यतया आधारभूत तलब प्लस बोनस प्राप्त गर्दछन्, तर अस्पतालहरूले उनीहरूलाई केवल आधारभूत तलब र महामारीको क्रममा सब्सिडी प्रदान गर्दछ। नतिजा स्वरूप, तिनीहरूमध्ये कतिले आफूले कमाएको भन्दा कम पैसा कमाए।
गुओ चिङ्: मार्च १७, २०२०
हुबेई प्रान्तमा केही क्षेत्रहरूले धेरै दिनका लागि लकडाउन गरेका थिए । यद्यपि नियमहरू परिवर्तन भइरहन्छन् र मानिसहरू अलमल्लमा पर्छन्। हिजो माचेङ्ग शहरका एक व्यक्तिले हाम्रो च्याटरूममा भने,”माचेङ्ग भोली फेरि लक हुनेछ।” अर्को व्यक्तिले सोधे किन, तर त्यो व्यक्तिलाई कारण थाहा थिएन। उनले भर्खरै भने कि उनीहरूले गाउँको कार्यालयबाट सूचना प्राप्त गरे, जसमा भनिएको छ: “नीति परिवर्तन भएको छ। राजमार्ग भोली बिहान ९ बजे बन्द हुनेछ। यदि तपाईंसँग [शहर छोड्ने अनुमति] छ भने कृपया छोड्नुहोस् र काममा फर्कनुहोस्। जति सक्दो चाडो।” मानिसहरू धेरै चिन्तित थिए र पास भएकालाई त्यहाँबाट गर्न आग्रह गरे।
हुबेईका अर्को साथीले उनको परिवारले अज्ञात स्रोतबाट सुनेका थिए कि उनीहरूको शहर फेरि बन्द हुनेछ। सन्देश शहर अनलक भएको केही दिनपछि प्रसारित भयो। उनी र उनको परिवार केहि चामल, तेल र केही खाना किन्न दौडे। त्यसको केहि घण्टा पछि, तिनीहरूलाई सन्देश एक अफवाह मात्र थियो भनियाे ।
नीति परिवर्तन हुँदैछ, र सरकार अब एक विश्वसनीय स्रोत छैन। व्यक्ति असुरक्षित र बेचैन छन्।
एउटा बच्चाले झ्यालबाट बाहिर हेरेकाे दृश्य। (फोटो क्रेडिट: गुओ चिङ्। अनुमतिको साथ प्रयोग गरियो।)
गुओ चिङ्: मार्च १८, २०२०
कसैले भने, “वुहानमा अवस्था सुधार हुँदैछ।” वुहानमा महामारी वास्तवमै नियन्त्रणमा छ। जहाँसम्म, महामारीसँग सम्बन्धित आतंक, त्याग, पृथकीकरण, आघात र पीडाहरूको बारेमा के हुन्छ? के यिनीहरू निको भएका छन्? COVID-19 ले शारीरिक र मनोवैज्ञानिक दुवै क्षति ल्याएको छ। मानिस निको हुन को लागि कति समय लाग्छ?
ब्रुकलिनमा ट्रामा सेन्टरका संस्थापक डा बेसल भ्यान डर कोलले मनोवैज्ञानिक आघातको बारेमा कुरा गर्दा उनले औंल्याए कि ९११ को अनुभव गर्नेलाई अरु भन्दा कम आघात भएको थियो। मनोवैज्ञानिक आघातलाई शान्त पार्ने तीन कारकहरू छन्: क्रियाकलाप, हेरचाह, र कथा सुनाउने।
“क्रियाकलाप” को मतलब भनेको कुनै विपत्ति आउँदा मानिसहरूले कार्य गर्न सक्दछन् … “हेरचाह” को अर्थ सेप्टेम्बर ११ को आक्रमणले संसारको ध्यान खिचेको थियो … “कथा सुनाउने” भनेको मान्छेहरूका अनुभवहरूका बारेमा कुरा गर्न सक्छन् र उनीहरूलाई त्यसो गर्नका निम्ति दोष दिन मिल्दैन। यस महामारीमा, जबदेखि लकआउन्ड शहरदेखि आवासीय जिल्लाहरूमा विस्तार भयो हामीलाई कार्य गर्नको लागि ठाउँ घट्दै गइरहेको छ। हामी फसेका छौं। “हेरचाह” लाई ध्यानमा राख्दै, वुहानले विश्वको ध्यान खिच्याे, तर बाहिरी सहयोगलाई एकपटक प्रवेश गर्न अवरुद्ध गरिएको थियो – अस्पतालका अधिकारीहरूको स्वीकृति बिना मेडिकल कामदारहरूलाई सहयोगको लागि पुग्न निषेध गरिएको थियो र स्वयम्सेवक समूहहरूको चिकित्सा आपूर्तिलाई सरकार नियुक्त संगठनहरूले रोकिदियो। जनताको ध्यान कार्यमा रुपान्तरण भएको थिएन। “कथा सुनाउने” सम्बन्धमा, हाम्रा केहि कथाहरू सेन्सर गरिएका थिए र धेरैले वेइबोमा ब्याकअप खाताहरू तयार गर्नुपर्‍यो।
त्रासदीहरूको सामना गर्नुपर्दा, साँचो कथाहरूलाई अफवाहको रूपमा लेबल गरिन्छ जबकि “सकारात्मक उर्जा” लाई बढावा दिईन्छ ।जब त्रासदीहरूप्रति सार्वजनिक ध्यान प्रतिबन्धित हुन्छ र आधिकारिक जवाफदेहीताको लागि जनताको माग अनुत्तरित हुन्छ, भावनाहरू बिस्तारै कमजोर हुँदै जान्छ र रीसलाई असहायताको भावनाले जित्छ।
गुओ चिङ्: मार्च १९, २०२०
वुहानमा शून्य पुष्टि भएका केसहरू छन्। के यो जानकारी भरपर्दो छ? आज बिहान ११ बिहान सम्पत्ति व्यवस्थापन कार्यालयका कर्मचारीले हाम्रो च्याटरूममा घोषणा गरे, “नमस्कार, हामीले एउटा नाईलाई हाम्रो समुदायमा आउन भनेका छाैँ। यदि तपाईहरु मध्ये कोही कपाल काट्न चाहनुहुन्छ भने कृपया आउनुहोस्। खर्च २० युआन हुनेछ (अमेरिकी डलर २.8383 डलर) प्रति व्यक्ति।” एक व्यक्ति तत्काल एस्टेट व्यवस्थापन कार्यालय गए, र चाँडै त्यहाँ लाइन मा ४-५ जना पुरुष थिए। धेरै दिनअघि मैले एक वकिललाई सोधें कि के उनले महामारीको बेलामा घरेलु हिंसाको सिकार भएकाहरूबाट सहयोग सन्देशहरू प्राप्त गरे? उनले मलाई आज बताइन् कि अखिल चीन महिला संघको स्थानीय शाखाले उनलाई बतायो कि एक एकल आमाले उनको बच्चालाई यसरी कुटिन् कि बच्चा नै मर्याे । उनले भनिन् कि शायद आमा एकदमै तनावग्रस्त थिइन् होला, हुनसक्छ उनको कुनै आय थिएन, वा हुनसक्छ ताला लगाउने बित्तिकै उनी फसेकी थिइन् – यी सबै कारणले गर्दा त्रासदी भयो, सबैभन्दा डरलाग्दो कुरा यो हो कि यो केवल त्रासदी मात्र होईन जसको बारेमा उसले सुनेकी थिइन्। बच्चा मरिसकेको छ र आमालाई सजाय दिइनेछ। बच्चाको कथा दयनीय छ तर हामी केवल आमालाई दोष दिन सक्दैनौं। यो एक सामाजिक त्रासदी हो।